Thermoplastic Paint Preheater Vagadziri | China Thermoplastic Paint Preheater Fekitori & Vatengesi
Shangdang taundi reDantu Dunhu, Zhenjiang Guta, Dunhu reJiangsu, China Mob / Whatsapp: +86 15862991398
Yekumaka Muchina Machine
Thermoplastic Road Kumaka Machine
Cold Paint Spraying Road Yekumaka Machine
Kuzvidzivirira-wega Thermoplastic Vibrating Line Kugadzira Machine
Makumi maviri eChikamu Mugwagwa wekumaka Machine
Yekumaka Mugwagwa Yekubatsira Midziyo
Mugwagwa Kutara Paint Kubvisa
Mugwagwa wekumaka Paint
—— Thermoplastic Paint Preheater -
Kana iwe uine chero mhinduro kana mazano, ndapota tinya bhatani pazasi kuti uwane meseji bhodhi uye tisiye meseji kwatiri
Bata Persion: James Zhang
Nhare: + 86-511-87059003
Mhomho: +86 15862991398
LXD500 Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater (Pasi Paka Paka）
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeiyo hydraulic yakapetwa humburumbira thermoplastic preheater. Yakagadzirirwa yekupaka, nharaunda, uye imwe diki saizi mugwagwa .it ine zvakanakira kushanda kwenguva yakareba, nyore mashandiro, uye yakapusa kugadzirisa, nezvimwe.
LXD400 Hydraulic Imwe Cylinder Thermoplastic Preheater
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeiyo hydraulic imwechete-humburumbira thermoplastic preheater. Iyo ndeimwe yemidziyo yepamberi yekumaka mamaki emugwagwa. Multipath integrated hydraulic transmission uye zvisingaverengeki kumhanya kumhanya dhizaini iyo inogona kuburitsa yakasimba torque, kuona kuti muchina unokwanisa kushanda mushe mushe unorema mutoro.
LXD1200T / 1200B Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater (Mafuta: Diziri kana LPG)
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeiyo hydraulic yakapetwa humburumbira thermoplastic preheater. Iyo inovandudzwa kubva kuLPGthermoplasticpreheater, iyo ine mukana wekureruka, wehupfumi, uye unoshanda zvakanyanya. kunyanya yakakodzera nzvimbo ine mhepo ine simba.
LXD1200JT / 1200JB Simba-rinoponesa Rudzi Hydraulic Double Cylinder Thermoplastic Preheater
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yesimba-rinoponesa mhando hydraulic kaviri humburumbira thermoplastic preheater. Icho chizvarwa chazvino cheiyo thermoplastic preheater, yakashongedzerwa ne new-typeattemperator, mudziyo unochengetedza simba uye unopisa zvine hunyanzvi izvo zvinogona kukubatsira iwe kuchengetedza zvakatenderedza chetatu chemafuta. Saka sarudza iyo kuti ikubatsire iwe kuita imwe mari.
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeLXD1200 / 800 hydraulic kaviri humburumbira thermoplastic preheater. Multipath integrated hydraulic transmission uye zvisingaverengeki kumhanya kumhanya dhizaini iyo inogona kuburitsa yakasimba torque, kuona kuti muchina unokwanisa kushanda mushe mushe unorema mutoro.
LXD300 Mechanical Imwe Cylinder Thermoplastic Paint Preheater
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemakanika imwe-humburumbira thermoplastic pendi preheater. Iyo yemitengo yakaderera-mutengo yakareruka uye diki, nokudaro ichiita kuti ive nyore uye nyore kutakura. Inogona kushandiswa muzvirongwa zvekuvaka zvidiki senzvimbo dzekupaka, dzimba dzekugara, fekitori-simuka uye zviteshi, nezvimwe.
LXD600 Mechanical Double Cylinder Thermoplastic Paint Preheater
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemakanika maviri silinda thermoplastic pendi preheater. Inogamuchirwa munzira yekutyaira, yepakati-hunyanzvi hwekunyungudika humburumbira, uye inotumirwa kunze kwakanyatsoshanda yakananga jekiseni inopisa. Iine zvayakanakira ekuvimbika mashandiro, anoshanda, ari nyore mashandiro, uye nyore kugadzirisa.
Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd. isainzi uye tekinoroji bhizinesi iro rinoshanda mune yehunyanzvi nzira yekumaka muchina kutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Iyo iri pazasi peRunyang Yangtze Rwizi Highway Bridge, Mugwagwa, njanji, uye chikepe chinopindirana ...
 Bata Persion: James Zhang
 Nhare: + 86-511-87059003
 Mhomho: +86 15862991398
© Copyright © Jiangsu Luxinda Traffic Zvivakwa Co, Ltd. Hot Zvigadzirwa - Sitemap